Strain Clamp mpanamboatra, mpamatsy - China Strain Clamp Factory
karazana wedge sy fonony insulation （NXL）
Fampiharana NXL series wedge type tensioning wire clamp dia mety amin'ny 20kV sy ambanin'ireo tsipika fizarana, ny conducteur alimika mitaingina overhead na ny mpitondra-tena tsy mihetsika dia miorina amin'ny insulate ny zoro na ny tsorakazo mihenjana terminal, mba hanamboarana na hanamafisana ny conducteur ambony, fonosana insulation ary ny fihenan'ny tariby mifampitohy fampiasana, milalao ny anjara asan'ny fiarovana insulate. Firafitry ny firafitra 1. Safidio ny firafitry ny aliminioma fanoherana mahery vaika avo lenta an'ny magnetika, tsy misy fako e ...
karazana tehina pull NXJ）
Fampiharana NXJL andian-dahatsoratra dia mety amin'ny fanamboarana sy fihenjanana overhead voaharo aluminium tariby (JKYL) amin'ny insulator kofehy amin'ny faran'ny na roa faran'ny fihenjanana fizarana ny 1-10kV sy ambany. Ny firafitry ny firafitra Ny akorandriaka vita amin'ny alim-by alimina avo lenta manohitra ny okididà, tsy misy herin'ny fako Ny fototry ny wedge vita amin'ny plastika manamafy, manana insulation tsara Tsy manala ny insulation la ...
NXJG Series insulation strain clamp (karazana wedge)
Fampiharana: Ny andiany NXJ dia mety amin'ny fanamboarana sy ny fihenan-danja amin'ny alàlan'ny alimina mitaingin-tsolika mitaingina rivotra (LKLYJ) miaraka amin'ny tadin'ny insulator amin'ny tendrony roa amin'ny terminal na ny fihenjanana misy ny 20KV sy ny ambany. 1Ny akorandriaka dia vita amin'ny fanoherana avo-okididra avo lenta alim-by tsy misy fatiantoka amin'ny fantsom-pandriana 2Wedge core dia vita amin'ny plastika injeniera matanjaka miaraka amina fampisehoana insul ...
Clamp amin'ny vatofantsikaPA
Fampiharana NJJ series wedge type insulation tensioning cable clamp dia mety amin'ny fanamboarana sy ny fihenjanana tariby mihidy (JKLYJ) amin'ny faran'ny na ny faran'ny fihenjanana 1kV ary ambanin'ny kofehy aluminium. Ny firafitry ny firafitra Ny akorandriaka sy ny vodiny dia vita amin'ny plastika avo lenta momba ny injeniera tsy misy manala ny insulation, azo apetraka mivantana. Rafitra mihombo, mora apetraka ary azo antoka. Xinwom dia orinasa teknolojia avo lenta mifantoka amin'ny fikarohana ...
Strain clamp （type hidrolika） NY serivisy fanamafisam-peo famerenam-bidy dia ampiasaina hanamboarana sy hampifandray ny mpitarika amin'ny tadin'ny insulator fihenjanana na ny fittings amin'ny tsato-kazo sy ny tilikambo amin'ny alàlan'ny hery mitazona ateraky ny mpitarika. Izy io dia vita amin'ny aliminioma mahery sy vy matanjaka, miaraka amin'ny faritra madio sy maharitra, mandritra izany fotoana izany dia mora ho an'ny fametrahana azy, tsy misy fatiantoka hysteresis, karbaona ambany ary angovo. Fametahana terrain （Ny vatofantsika vatofantsiky） Katalaogy No. ....
Ny clamp clrain, ny bolt type, ny clamp misy fihenam-bidy karazana NLD dia ampiasaina amin'ny tsipika elektrika na ny fijanonana, ny fantsom-pitaterana mijanona ary ny mpampita taratra ary koa ampiasaina amin'ny fampifangaroana ireo insulator tery amin'ny alàlan'ny fampidirana fitaovana na fampifangaroana ny mpampita taratra amin'ny perch. Ny vatam-paty sy ny mpiambina dia vy mora volavolaina, ny vy misy stainess cotter-pin, ny faritra hafa dia vy. Ny tanjaky ny clamp dia mihoatra ny 95% ny tanjaky ny conducteur. Ca ...
Fametahana terrain NLL-1
Ny clamp clrain, ny bolt type, ny classe NLL karazana tadin-doha dia ampiasaina matetika amin'ny tsipika herinaratra mijanona na ny fidirana, ny tsipika fitarihana mijanona ary ny mpampita taratra ary koa ampiasaina amin'ny fampifangaroana ireo insulator tery amin'ny alàlan'ny fampidirana fitaovana na fampifangaroana ny mpampita taratra amin'ny perch. Natao ho an'ny tsipika fiaramanidina hatramin'ny 30kV. 1) Mety amin'ny fametrahana ny alim-baravarana alimina mitazona alim-baravarana na ny alim-bolo amin'ny alàlan'ny alim-baravarankely amin'ny zoro mihodina na ny insulator amin'ny tsato-kazo terminal, hanamboarana sy hamehezana ...